Ebee ka ịzụta Genotropin na Thailand - Genotropin GoQuick Pen 12mg
Ịgachi price 0.00 ฿ 30,800.00 ฿ Sale
Dabere na nyocha 1 Dee a nyochaa
Ihe dị n'ime:
- Ogwe mmiri ọgwụ (2-8 degrees temperature)
Ntuziaka maka iji (PDF faịlụ)
Ihe omuma ihe: Somatropin
CCF: Mkpụrụ hormone na-eto eto
emeputa: PFIZER MFG. BELGIUM NV (Belgium)
Ihe omumu ọgwụ
Mkpụrụ ọgwụ na-eto eto ọgwụ. Ọ na-anọchite anya synthesized site usoro recombinant somatropin, yiri ka ụmụ mmadụ na-eto hormone. Ụmụaka na-enweghi hormone na-eto eto, na Prader-Willi syndrome somatropin na-amụba ma na-eme ka ọkpụkpụ skeleton mụbaa. Dị ka ndị toro eto, na ụmụ somatropin na-ejide onwe ha, ha na-akwalite ahụ ike ma na-akwalite nchịkọta nke abụba. Na-echebara nlezianya anya dị ka anụ ahụ na-adọrọ adọrọ. Na mgbakwunye na mmetụ nke lipolysis, somatropin na-ebelata ntinye nke triglycerides na ebe ndị na-abụ abụba. E wezụga nke ahụ, ọgwụ na-emetụta abụba, carbohydrate na nnu salt-salt metabolism. Somatropin na-akpali ndị na-anabata LDL n'ime imeju, ma na-eme na lipid na lipoprotein profaịlụ na ọbara. Ohaneze, ọrụ ndị ọrịa somatropin na-enweghi ụkwara hormone na-ebelata ịta LDL cholesterol na apolipoprotein B na ọbara. Ọzọkwa, enwere ike ịbelata cholesterol zuru ezu. Somatropin na-eme ka insulin na-etoju, Otú ọ dị, etoju glucose bu ọnụ anaghị agbanwe. Ụmụaka ndị nwere hypopituitarism nwere ike ịnwe ọrịa hypoglycemia na-ebu ọnụ, na-etinye aka na ndị ọrịa na-enweta ọgwụ. Somatropin weghachite olu nzere plasma na mmiri anụ ahụ, belata na enweghm hormone; eme ka sodium jide, potassium na phosphorus. Somatropin na-akpali ọkpụkpụ metabolism. Na ndị ọrịa na-enweghi ụkwara hormone na osteoporosis somatropin ọgwụgwọ ogologo oge na-eduga n'iweghachi ihe mejupụtara ịnweta ma ọkpụkpụ ọkpụkpụ. Usoro ọgwụgwọ na-eme ka ahụ ike na ntachi obi anụ ahụ. Somatropin na-emekwa ka mmepụta mkpụrụ obi pụta, mana usoro a ka amabeghị. Ọrụ ọ nwere ike igosi na ọ na-abawanye na mgbochi ọkpụkpụ. Na ndị nwere ọrịa na-enweghi ụkwara hormone na-eto eto nwere ike ibu ọnụ na ikike uche na mgbanwe na ọnọdụ uche. Somatropin na-eme ka ndụ dịkwuo mkpa, Ọ na-eme ka ncheta dị mma ma na-emetụta nguzozi nke ndị na-adịghị ahụ maka ụbụrụ na ụbụrụ.
Nwepu na nkesa
Dịka ndị nwere ahụ ike, na ndị ọrịa na-eto eto homone emetụtaghị ihe dị ka 80% n / a banyere Genotropin®. Mgbe p / dose 0.1 IU / kg arọ ahụ Cmax bụ 13-35 ng / ml nwetara mgbe 3-6 no. Vd bụ 0.5-2.1 l / kg.
Biotransformiroetsa akụrụ na imeju. Nkezi T1 / 2 mgbe na / na Genotropin® na ndị ọrịa na-eto eto homone bụ banyere 0.4 ọ dịghị. Mgbe s / na iwebata ọgwụ T1 / 2 ruru 2-3 ọ dịghị. Ihe dị iche iche dị iche iche, ma eleghị anya, na-ejikọta ya na iji nwayọọ nwayọọ na-aṅụ ọgwụ na n / a ogwu. N'ihe gbasara 0.1% a na-enye ọgwụ na-agbanweghị agbanwe na-esoghị bile.
Ọrịa ọgwụ na ahụike pụrụ iche
Gena nke oma bioavailability nke Genotropin® mgbe obula na nwoke na nwanyi.
Mmetụta dị iche iche, nke njedebe mmiri na-ejide: okenye (> 1% na <10%) - edere ederede, pastoznost extremities, artralgii, myalgia and paraesthesia. Mmetụta ndị a na-adịkarị nwayọọ ma ọ bụ dị nfe, Ọ na-eme n'oge ọnwa mbụ nke ọgwụgwọ ma belata ngwa ngwa ma ọ bụ mgbe mwepụsịrị. Mmetụta nke mmetụta ndị a na-adabere na Genotropin®, afọ nke ndị ọrịa na, ma eleghị anya, n'ụzọ dịgasị iche iche na afọ, bụ nke ezughị oke hormone. Na ụmụaka, mmetụta ndị a dị oke ụkọ (> 0.1% na <1%). CNS: adịkarịghị (> 0.01% na <0.1%) - ọbara ọbara intracranial na-abaghị uru, nwere ike ịzụlite ọzịza nke akwara optic. Na akụkụ nke usoro endocrine: adịkarịghị (> 0.01% na <0.1%) - mmepe nke ọrịa shuga bụ 2. Na-egosiputa ọnụ na ọbara cortisol. Ihe omimi nke ihe a na-egosi na ọ ga-ejedebe. Na akụkụ nke usoro mgbu: dislocation na subluxation nke femoral isi, soprovozhdaющiesя prihramыvaniem, ihe mgbu na hip na ikpere; na ndị ọrịa na ọrịa Prader-Willi nwere ike ịmepụta scoliosis (td Genotropin® Ọ na - eme ka ọnụ ọgụgụ na - eto eto); ọ dịkarịghị - myositis, nke nwere ike kpatara site na ihe m-cresol nche, nke bụ akụkụ nke Genotropin®.
Mmeghachi omume na-ekpo ọkụ: akpụkpọ anụ na ncha.
Mmeghachi omume mpaghara: na saịtị ịgbawa (> 1% na <10%) - ọkụ, ọkụ, ọnyá, ụkọ, hyperemia, ọzịza, lipoatrophy.
Ndị ọzọ: na ọnọdụ ole na ole (<0.01%) - Otú ọ dị, mmepe nke ọrịa leukemia na ụmụ, Otú ọ dị, ọrịa ọrịa kansa ọbara anaghị adị iche na nke ahụ na ụmụaka na-enweghị uto hormone.
- Mgbaàmà nke uto tumo, gụnyere nchịkọta a na-achịkwaghị achịkwa nke intracranial tumọ (ọgwụgwọ antitumor ga-agwụ tupu ịmalite ọgwụ Genotropin®);
- Ọnọdụ dị egwu, na-eto ngwa ngwa na ndị ọrịa n'ihi ịwa ahụ ma ọ bụ abdominal, otutu trauma na nnukwu nsogbu iku ume;
- Nnukwu oke ibu (njedebe nke ịdị arọ / elu dị elu karịa 200%) ma ọ bụ ọrịa strok siri ike na ndị ọrịa na Prader-Willi syndrome;
- Emechi nke epiphyseal ibu zones nke ogologo ọkpụkpụ;
- Achọpụta ihe ọ bụla nke ọgwụ.
NDỊ ọrịa na-arịa ọrịa shuga, mgbatị ọbara intracranial, gipotireoze, kwesịrị ịdọ aka ná ntị.
EKWESỊRỊ NA NWA
Ahụmahụ ahụike na Genotropin® n'oge ime dị oke. Ya mere, n'oge ime ime ga-achọpụta n'ụzọ doro anya mkpa ọ dị maka ịhọpụta ọgwụ na ihe ize ndụ nwere ike ime, nke metụtara ya. N'ime oge ime afọ nke pituitary growth hormone budata belata mgbe 20 nke izu gasịrị, a na-edochi ya kpamkpam site na izu 30 placental, ya mere, ọ dị mkpa na Genotropin® na-agbanwe agbanwe n'oge atọ n'ime afọ atọ nke afọ ime. Ihe omumu ihe omumu nke anu aru egosighi ihe ojoo na nwa ebu n'afọ, nke o kwesighi iburu, a ga-enweta ihe yiri nkea mgbe itinye mmadu Genotropin®. Ezigbo ihe ọmụma banyere excretion nke hormone na-eto eto na ara ara adịghị anọ, ma na ihe ọ bụla, absorption nke protein na-enweghị ngọngọ site na eriri afọ nke nwa ahụ bụ nnọọ eleghi anya.
Ụdị ọdịdị Genotropin® amaghị. Mgbaàmà: na nnukwu hypoglycemia nwere ike imebiga ihe ókè, emesịkwa hyperglycemia. Ogbugba oge n'ogologo nwere ike ịpụta mgbaàmà a mara nke ụba hormone na-eto eto (akromegalija, gigantizm). Ọgwụgwọ: iwepụ ọgwụ, simptomaticheskaya ọgwụgwọ.
MGBE AHỤ AHỤ
GCS na ngwa ngwa ya na-ebelata mmetụta na-akpali akpali nke Genotropin® na usoro mmepe. Site na iji Genotropin® mee ihe n'otu oge na thyroxin ịdị arọ nke ọbara ọbara nwere ike ịmalite.
MGBE NDỊ MMADỤ NA-EKWU NDỊ ỌZỌ
A na-ewepụ ọgwụ ahụ n'okpuru ndenye ọgwụ.
ỤLỌ NA ỤLỌ NKE Ntụziaka
A ghaghị ịchekwa ọgwụ ahụ n'aka ụmụ, ebe gbara ọchịchịrị na okpomọkụ nke 2 Celsius na 8 Celsius C. Ndụ ndụ - 3 afọ. Enwere ike ịchekwa ngwọta na friji (na okpomọkụ nke sitere na 2 ° ruo 8 Celsius C) n'oge izu 4. Zere ka oyi ma ọ bụ katiri, ọ dịghị ihe ngwọta dị njikere.